Ingxelo yoThengiso lweZindlu: Ezona ndawo zithengisayo ePalm Beach - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Iialling Bowling kunye ne-33-Bedroom Estates: Iipropathi zePalm Beach ze- $ 100M kunye nokunye
Iialling Bowling kunye ne-33-Bedroom Estates: Iipropathi zePalm Beach ze- $ 100M kunye nokunye
I-West Palm Beach.Imifanekiso kaGetty
amagumbi okuxoxa asimahla kwi-intanethi
Ukubonelelwa kukunikezela okungaphezulu kunye neenkanyamba zamva nje, imakethi yokuthengisa izindlu nomhlaba yaseMiami iye yahamba kancinci kule minyaka idlulileyo. Kwaye ngelixa idatha esandula ukukhutshwa ibonisa ukuba amaxabiso ayenyuka-ngexabiso eliphakathi lokuthengisa lendawo yokuhlala ikhula nge-2.8 yeepesenti ukuya kwi-406,000 yeedola, ngokutsho kukaDouglas Elliman Real Estate-Ummelwane kaMiami ongasemantla ubona amanani aphantse abonwa ngaphambili.
EPalm Beach, ixabiso lokuthengisa eliphakathi kwikhaya losapho olunye okanye ikhondomu inyuse iipesenti ezili-165.2 ukuya kwizigidi ezili-15.2 zeedola, unyaka ongaphezulu. Ngokwengxelo yekota yesine evela ku-Elliman, umda wokungena kwintengiso ye-Palm Beach ngoku yi- $ 10.6 yezigidi. Umbhali we Ingxelo ka-Elliman , Umvavanyi wezindlu nomhlaba uJonathan Miller, uthi esinye sezizathu zokuba ispike kukuba abathengisi bePalm Beach eneneni baziphungulile iipropathi zabo, oko kukhokelela kwintengiso enkulu.
Abathengisi, emva kokuhamba ngolwandle iminyaka emininzi, ekugqibeleni bajonga ngapha nangapha kwaye babone ukuba intengiso ihamba ngaphandle kwabo, utshilo uMiller. Xa ebuzwa ukuba kutheni imakethi yasePalm Beach ichuma, ngelixa iMiami ifumana ukukhula okuthozamileyo, uMiller wachaza ukuba ziimarike ezimbini ezahlukeneyo.
Imakethi yasePalm Beach inabathengi abangaphandle kakhulu. Inabaninzi baseNew York kwaye ikhuphisana neeHamptons. Isitokhwe sezindlu sijijelwe kwisiphelo esiphakamileyo, ngelixa iMiami ingaphezulu kwendawo yemetro enoluhlu olubanzi lweentlobo zezindlu, utshilo.
Nanku ukujongwa kwezona zintathu zibiza kakhulu kwimarike yasePalm Beach, ebonisa indlela eligeze ngayo indawo yoluntu.
Ngo-2000 oLwandlekazi lwaseBoulevard
Ixabiso: $ 195 yezigidi
Xa uManalapan wabuyela emarikeni ngo-2015 nge-195 yezigidi zeedola, yayingeyiyo eyona ndawo ibiza kakhulu eFlorida, yayiyeyona nto yayixabisekileyo kwisizwe (yacinywa kamva, xa iBel-Air spec ekhaya yafika kwimarike nge-250 yezigidi) . Emva kokuhlala kwimarike phantse iminyaka emibini, kwaye ushiye ixabiso lama-30 ezigidi zeedola, i-15.7-acre, ipropathi yokulala engama-33 yatsalwa kwintengiso evulekileyo ngasekupheleni konyaka ophelileyo. Kodwa, ewe, oko akuthethi ukuba ipropathi ayithengiswa, njengoko iipropathi ezikule nqanaba zihlala zithengiswa ngokuzolileyo, njengoko kubizwa ngokuba kukuluhlu lwe-whisper. Nangona kunjalo, iqela langaphambili lokuthengisa lepropathi linqabile ukuphawula ngobume bepropathi.
Kodwa ucinga ukuba usengayithenga indlu yaseManalapan, eyaziwa njengeGemini, kwilifa lokupapasha u-William Bernard Ziff Jr. nantsi into onokuyifumana:
Indlu ephambili inobunzima kwii-62,220 iinyawo ezikwere kwaye yakhiwa nge-1940s ngaselunxwemeni lwesiqithi somqobo. Inxibelelene nepropathi yamawele amagumbi amane amagumbi eendwendwe ngokusebenzisa itonela enkulu engaphantsi komhlaba ene-air-conditioner kwaye enefenitshala epheleleyo. Enye ipropathi ebizwa ngokuba yiMango House kwilifa inamagumbi asixhenxe okulala.
Kwimihlaba, kukho indawo yegalufa lokuziqhelanisa kunye nenkundla yezemidlalo kunye nenkundla yentenetya, inkundla yebhasikithi kunye nephuli. Ngokwendalo, kukwakho nendawo yokumisa isikhephe kumchweli wezikhephe.
I-1500 yoLwandle lwaseBoulevard
$ 95 yezigidi
Sisinye kwisithathu se-acreage kwaye phantse isiqingatha sexabiso leGemini, kodwa eli lifa aliseyonto yokuthimla.
U-Billionaire uJim Clark, umseki-mbumbano weNetscape Communications, ngu ukubuza nje i-95 yezigidi zeedola Kwindlu yakhe ePalm Beach eyi-5.5-ezantsi ukusuka kwi-137 yezigidi zeedola ukuqala kwakhe ukuyidwelisa ngo-2016. Nangona kunjalo, indawo yaseClark iseyeyona ndawo ibiza kakhulu kwintengiso evulekileyo ePalm Beach, ngokweZillow.
Ipropathi, ejonge elwandle kwicala elingaphandle kunye nechibi kwelinye, ineenyawo ezingama-68,831 zendawo yokuhlala ethe saa kwindlu enamagumbi okulala amathandathu, indlu yeendwendwe enamagumbi amabini okulala kunye nendlu enamagumbi amabini okulala elwandle.
Uluhlu lodweliso kunqabile kule propati, kodwa inye into eqinisekileyo kukuba uClark wenze utyalo mali oluhle kakhulu. Ipropathi ka-1927 yagqibela ukuthengiswa ngo-1990 ngeedola ezili-11 nje zeedola, ngokweZillow.
Ngo-1071 iBoulevard eseMantla oLwandle
$ 64.9 yezigidi
Okokugqibela, ngelixa ngokuqinisekileyo kukho uluhlu lokuhlebeza ngokubuza okukhulu, Ngo-1071 iBoulevard eseMantla oLwandle iyunithi yesibini ebiza kakhulu kwimarike evulekileyo. Kwakhona kunomdla, kuba, ngokungafaniyo nabo bakhuphisana nabo, ulwakhiwo olutsha.
Eyakhelwe ngo-2015, le ndlu ingazange ihlale kuyo. Kwaye funda ulwakhiwo olutsha apha njenge: jam-egcwele izinto ezintle. Indawo yokuhlala i-35,993-square-foot ibonisa i-bowling alley, indawo yaseshashalazini, igumbi lokushicilela kunye nelayibrari, ii-242 ezinyaweni zolwandle kunye negaraji yeemoto ezisibhozo.
Ngokutsho kweReal Deal, ipropathi yeyetrasti enxulumene namagqwetha endawo yaseFiladelfiya uVahan noDanielle Gureghian. Ukuqala kwayo ukufika kwimarike amaGureghi ayebuza i-84.5 yezigidi zeedola.
UChristopher Cameron yintatheli ezimeleyo eseBrooklyn, egubungela izindlu nomhlaba, ubutyebi nenkcubeko.
Ukuvuselelwa kweDemokhrasi akuphumelelanga 'Isicwangciso sePied Piper' se2018
Iinkwenkwezi ezimbini: 'Indoda ejikelezayo' Luhlobo lwemovie oza kuyishiya kwangoko
Umfanekiso oqingqiweyo weWall Street's 'Charging Bull' oqingqiweyo Kuyabonakala ukuba uyashukunyiswa
Yiyo le ndlela kakubi ngayo iMelika eyayingafuni uHillary Clinton ukuba abe nguMongameli
I-joe farrell yonjiniyela efanelekileyo
Ihlazo elilandelayo lemozulu?
U-elon musk uhambela kwi-texas
ngubani umntu wokugqibela emhlabeni emhlabeni
Inkqubo ye- hipaa yokulandela ukususwa kwengqokelela
Ukufika ngokungxamisekileyo kwejetblue kulax
Izitulo zeofisi zeentlungu ezisezantsi